सम्माननीय को ?
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका अनुसार निम्नानुसारका पदाधिकारीहरुलाई मात्र सम्माननीय शब्द प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
1 सेल्फी अभियान
3 Career News and Info वैशाख १३ , २०७४
5 Meditation (ध्यान) भनेको के हो ?
6 Bitcoin भनेको के हो ?
7 Career News and Info भाद्र १८, २०७४
8 नयाँ नेपाल निमार्ण कोष स्थापना
10 सुनौला हजार दिन भनेको के हो ?